IMassiveImpact: Izindleko Ngezenzo Zesikhangiso ngasinye Seselula | Martech Zone
NgoMsombuluko, Ephreli 14, 2014 NgoMgqibelo, Januwari 14, 2017 Douglas Karr
Ukubukwa, okuvelayo, ukuchofozwa… Ngicabanga ukuthi kungani sisalinganisa futhi sikhangise ngokususelwa kulawo ma-metric. MassiveImpact iyinethiwekhi yesikhangiso eselula efinyelela ngaphezu kwe-1 billion abasebenzisi be-inthanethi beselula abavela emazweni ayi-190 futhi abakwenzi. Basebenzisa i-CPA, noma izindleko ngesenzo ngasinye, ukuthola amanani abo ezikhangiso. Kulungile… ukhokha kuphela uma kukhona ukuguqulwa kwangempela! Lokhu kusho ukuthi ukubuyiselwa kwakho ekutshalweni kuqinisekisiwe.
IMassiveImpact inikeza a 2-tier imodeli yokukhangisa yeselula, usebenzisa iMassiveImpact Event Tracker:
Izindleko Ngokufakwa ngakunye (CPI) - khokha njengoba abasebenzisi abasha befaka uhlelo lwakho lokusebenza (imodeli ehleliwe)
Umcimbi wokufakwa ngemuva - I-MassiveImpact ikukhiqizele imikhiqizo ethile bese uyikhokha njenge-
amakhasimende akho empeleni ayazithenga, ngaphakathi kohlelo lwakho lokusebenza (imodeli yesabelo semali engenayo)
IMassiveImpact inikela ngonjiniyela bohlelo lokusebenza nabashicileli besiza esingumakhalekhukhwini ngeplatifomu yokuphela kokuphela, esekela umjikelezo wempilo ogcwele kusuka ekushicilelweni kwesikhangiso, ukhombe ekulandeleni ukusebenza kokuphela kokuphela analytics, okuholela ekwenziweni kwempahla, ukutholwa kohlelo lokusebenza nokutholwa komsebenzisi. Ama-algorithms we-MassiveImpact optimization optimization enzelwe ngqo inkundla yokukhangisa yeselula esebenza.
IMassiveImpact's ukusebenza kwesikhathi sangempela Ipulatifomu (RTP) inika amandla abakhangisi ukuthola amakhasimende amasha nge-ROI eqinisekisiwe. Ukuthuthuka kutholakala ngendlela yokulinda yamakhasimende esalinde ilungelo lobunikazi, ngokususelwa kumlando wangempela wokuguqulwa komsebenzisi. Inhlanganisela yendlela ye-MassiveImpact's RTP kanye nokuphathwa okuzenzakalelayo kwe-TargetAdLive® kwe-inventory yezikhangiso kuvumela umjikelezo wokusetshenziswa kwezikhangiso wesikhathi sangempela, ukuphela.
I-TargetAdLive® isisombululo sobuchwepheshe obuphambili beMassiveImpact. Ubuchwepheshe bokukhangisa obususelwa ku-algorithm, iTargetAdLive® iqashwe yithimba leMassiveImpact ukwenza imikhankaso yezikhangiso zeselula ezisebenza ngokusebenza kwayo. Ngenkathi izixazululo zendabuko zesikhangiso seselula zigxila kuzindlela ezijwayelekile zokumaketha ezisekelwa kumakhalekhukhwini ezinganaki i-98% yedatha etholakalayo; I-TargetAdLive® isebenzisa yonke idatha etholakalayo ukukala amathuba omsebenzisi ngamunye okuthenga umkhiqizo othile.
I-TargetAdLive®, ihlaziya isampula ledatha yekhasimende labathwali ', labashicileli' noma labahlinzeka ngezinsizakalo ezingenantambo ngemininingwane enikezwe esikhangisweni sabakhangisi. Ikhetha, ngesikhathi sangempela, isikhangiso esingabona umphumela omuhle kakhulu futhi ngaleyo ndlela sikhiqize imali eningi. I-TargetAdLive® bese ibhangqa izikhangiso zeselula namakhasimende okungenzeka ukuthi enze isenzo esifiselekayo, ngokususelwa kuyo yonke idatha yomsebenzisi eqoqiwe, ilingana nephrofayili yomsebenzisi nokuqukethwe kwesikhangiso futhi isebenza isikhangiso esifanele.
Tags: izindleko ukufakwa ngakunyeomkhuluimpactinethiwekhi yesikhangiso yeselulaukulanda kweselulaumcimbi wokufakwa ngemuvaukusebenza kwesikhathi sangempelaI-TargetAdLive
I-PayStand: Yamukela Amakhadi Esikweletu angenayo Imali Yokuthenga